Fazụ ahịa Azụmaahịa: Mgbe Tech Na-emebi Ihe Karịa Ezi Ihe | Martech Zone
Mgbe anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ, anyị na-agwakarị ha na anyị ka nọ n'ọhịa ọdịda anyanwụ nke ịre ahịa n'ịntanetị… ndị a ka bụ ụbọchị ndị na-eto eto ma ọ bụghị ihe niile ka a nwara. Mana nke ahụ apụtaghị na anyị agaghị enwe ike ịmụta ihe site na mmejọ nke ndị ọzọ.
Site na teknụzụ ọhụụ na-apụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla, ọ na-ewe onye ọkachamara azụmaahịa nwere ahụmịhe na nke gụrụ akwụkwọ ka ọ mara etu esi eji ikike ahịa ọgbara ọhụrụ na-eme ihe ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ọrịre ahịa. N'ebe a, anyị na-ahụ ahịa dị elu dara ada, na-akọwapụta ihe mejọrọ na otu ị ga - esi zere ịme otu ụdị mmejọ ahụ. Ngwa Lattice
Nke a bụ nchịkọta nke ụfọdụ emezighị emezi ụlọ ọrụ na-eme. Aga m ekwenye n'ụzọ zuru ezu na m na-enwekarị mmejọ ọdịnaya. M ga-agbakwunye na m ka ga-ahụ nnukwu ngwa nke koodu QR na mpụga nke Google Glass (nke na-enweghị isiokwu). Ọ bụ m chere na ha bụ ọdịda niile dịka ha anaghị etinye akara na enweghị ncheta dị ka ihe dịka ụzọ URL.
Inweta ihe ahia na ahia ozi site na Ledgelọ Ihe Ọmụma Lattice.
Tags: akpaakacontent Marketingemail adaidaokpuhashtaghashtag idaahịa akpaaka na-adaahịa adaire ahịa ahịaVidio AhịaUsoro QRkoodu qr daaezubere iche idavideo ida